‘रामकहानी’ भर्सेस ‘रोज’, दर्शकको साथ कसलाई ? « Ramailo छ
‘रामकहानी’ भर्सेस ‘रोज’, दर्शकको साथ कसलाई ?
समय : 6:00 am
भदौ २२ गते, शुक्रबारबाट दुई नेपाली फिल्म ‘रामकहानी’ र ‘रोजी’ प्रदर्शनमा आएका छन् । यी दुई फिल्महरु स्टार र प्रचार प्रसारका कारण चर्चा र प्रतिक्षामा छन् ? निर्माणदेखि नै चर्चामा रहेका ‘रामकहानी र ‘रोज’ले दर्शकलाई हलमा आकर्षण गर्लान् ?
एकसाथ प्रदर्शनमा आएका ‘रामकहानी’ र ‘रोज’ मध्ये व्यापारिक रुपमा कुन अगाडी होला ? दर्शकले कुन फिल्मलाई ताली देलान् ? कुनलाई गाली ? कसले लामो यात्रा तय गर्लान् ? प्रतिक्षा गरौं । यतिबेला भने ‘रामकहानी’ र ‘रोज बारे’ छोटो चर्चा गरौं । ‘रामकहानी’ टिमसँग गरिएको रमाइलो कुराकानी हेर्नुस् :
पूजा शर्मा, आकाश श्रेष्ठ, केदार घिमिरे माग्ने बुढा र जितु नेपाल स्टारर रामकहानीले दर्शकलाई रिझाउला ? लभ स्टोरी फिल्मका अब्बल निर्देशक सुदर्शन थापा कमेडी जनरामा पनि सफल होलान् ? कि उनले थप गृहकार्य गर्नुपर्ला ? लभस्टोरी र कमेडी युक्त फिल्म रामकहानीप्रति यी र यस्तै खाले प्रश्न उब्जिरहेका छन् । यी प्रश्नको जवाफ शुक्रबार साँझसम्म दर्शकले दिने नै छन् । ‘रोज’को प्रोमो हेर्नुस् :
यता युवा स्टार प्रदीप खड्का ‘रोज’ मार्फत दर्शकमाझ भिन्न भूमिकामा आएका छन् । चकलेटी हिरोलाई दर्शकले क्रिमिनल व्वोय को रुपमा रुचाउँलान् ? प्रेम गीत, यसको सिक्वेल र लिलिबिली का दर्शकलाई प्रदीपले पुनः हलमा तान्लान् ? यी र यस्तै प्रश्नले रोज फिल्म प्रदीपको काँधमा चढेको छ ? प्रदीपका लागि रोज कत्तिको भारी होला ? यसको जवाफ पनि दर्शकले शुक्रबार साँझम्म नै दिनेछन् ।
निरक पौडेल निर्देशित फिल्ममा प्रदीपसँगै पारमिता राज्यलक्ष्मी राणा र मिरुना मगर मुख्य भूमिकामा प्रस्तुत भएका छन् ।